တရုတ် KF94 မျက်နှာဖုံးစက်ရုံ - ပေးသွင်းသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ - Dongguan Gongming Automation Technology Co. , LTD
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > KF94 မျက်နှာဖုံး
KF94 မျက်နှာဖုံး isaspecial machine for automatic production of KF94 မျက်နှာဖုံး.
KF94 မျက်နှာဖုံး is fused using ultrasonic technology.
The KF94 မျက်နှာဖုံး can automatically cut off the mask body, automatically insert the nose wire, automatically weld the ear loop, and automatically stack.
KF94 (Fish Face) မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (၁ + ၂)
ကျွန်ုပ်တို့သည် KF94 (Fish Face) မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (1 + 2)၊ အမျိုးမျိုးသောအလိုအလျောက်မှိုများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်အတူကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်ပါတို့မှာ KF94 (Fish Face) မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (1 + 2) နှင့်ပတ်သက်သောအချက်ဖြစ်သည်။ KF94 (Fish Face) မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (1 + 2) ကိုပိုမိုနားလည်ရန်သင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
မြန်နှုန်းမြင့် KF94 (Fish Face) မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (1 + 1)
မြန်နှုန်းမြင့် KF94 (Fish Face) မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (1 + 1) သည်မျက်နှာဖုံးကိုယ်ထည်ကိုအလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်နိုင်သည်၊ နှာခေါင်းကြိုးအားအလိုအလျောက်ထည့်နိုင်သည်၊ နားကွင်းကိုအလိုအလျောက်ဂဟေဆော်နိုင်သည်၊ အလိုအလျောက်စုပုံနိုင်သည်။
မြန်နှုန်းမြင့် KF94 (Fish Face) မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (1 + 2)
မြန်နှုန်းမြင့် KF94 (Fish Face) မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (1 + 2) သည်ငါးပုံစံမျက်နှာဖုံးများအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ရန်အထူးစက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ultrasonic နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ကုန်ပစ္စည်း KF94 မျက်နှာဖုံး ကိုနောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းရဆုံး၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ အဆင့်မြင့်၊ ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူပြီးအကြမ်းခံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံကို Dongguan Gongming Automation Technology Co. , LTD ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများဖြစ်သည်။ ဈေးသက်သာပြီးဈေးနည်းသော KF94 မျက်နှာဖုံး တွင် CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသည်။ သင်ကိုးကားစရာရှိပါသလား ဟုတ်တယ်။ ငါတို့သည်လည်းစျေးနှုန်းစာရင်းနှင့်အတူပေးနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်နိုင်သည့်လျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့် ၀ ယ်ခြင်းမှကြိုဆိုပါသည်။ သင်လိုအပ်လျှင်အခမဲ့နမူနာကိုလည်းသင့်အားထောက်ပံ့ပေးသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်တစ်နှစ်အာမခံကိုထောက်ပံ့သည်။